Kilaasteraan oomishuun qonnaan bultoonni caalmaatti akka waliitti hidhaman taasiiseera – Obbo Shimallis – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Kilaasteraan oomishuun qonnaan bultoonni caalmaatti akka waliitti hidhaman taasiiseera – Obbo Shimallis
On Oct 16, 2021 83
Finfinnee, Onkololeessa 6, 2014 (FBC) – Kilaasteraan oomishuun Ooyiruu qofa osoo hin taane, qonnaan bultoonni caalmaatti akka waliitti hidhaman taasiisuu Preezdaantiin Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan ibsan.
Ministiroonni haaraa muudaman aanaa ada’aatti oyiruu qonnaan bultootaa kilaastaraanmisoome daawwataa jiru.
Ministiroonni kunneen Xaafii fi Avookaadoo kilaasteeran misoome daawwataniiru.
Mootummaan Naannoo Oromiya hojii misooma kilaasteraa babal’isuun, qonnan bultoonni akka oomishan, waliin akka karoorsan, teeknolojii walfakkataa fi midhaan walfakkaataa akka oomishaan hojiin walitti hidhuu hojjetamuu Preezdaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisan ibsaniiru.
Deeggarsii fi xiyyeffannaan qonnaan bultootaaf kennamu cimuu akka qabus kaasaniiru.
Daawwannaa kanarratti Itti aanaa Muummee Ministiraa fi Ministirri Ministeera Dhimma Alaa Obbo Dammaqaa Mokonnin dabalatee ministiroota fi qondaaltonni mootummaa biroon argamaniiru.
Ministirri Dhimma Alaa Chaayinaa Finfinnee galan
Oduu biyya keessaa10488